. အနှစ်(၂၀)ပြည့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း ပွဲတော်ရဲ့ အဓိကအချက်ဟာ "အန္တိအုတ်မြို့ သို့သာသနာပြုခြင်း:" (Mission To Antoich) ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပြီး (တမန်တော်ဝတ္တု ၁၁း၁၉-၂၀) ကို အခြေပြုထားပါတယ်။ ကနဦးအသင်းတော်ရဲ့ သာသနာပြု မျိုးစေ့ဟာ၊ သတေဖန် (Stephen) ရဲ့ အသေခံခြင်းအားဖြင့် အစပြုခဲ့ပါတယ်။ Jurusalem မှာ ညှင်းဆဲခံရတဲ့ ယုံကြည်သူများဟာ ဖိနိတ် (Phoneia)၊ ကုပရု (Cyprus)၊ အန္တိအုတ် (Antioch) သို့ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ကွဲပြားသွားတဲ့ ယုံကြည်သူများဟာ အစပိုင်းမှာ ယုဒလူတွေကိုသာ ဧ၀ံဂေလိဟောပြောကြပါတယ်။ နောက်မှ ကုပရုပြည်သား၊ ကုရေနေပြည်သား ယုံကြည်သူများဟာ အန္တိအုတ်မြို့သို့ သွားပြီး ဟေလနစ် (Greek) လူမျိုး၊ တပါးအမျိုးသားတွေကို ဟောပြောလာတဲ့အခါ လူအပေါင်းတို့ ပြောင်းလဲလာကြပါတယ်။ ဒီသတင်းကို Jurusalem အသင်းတော်က ကြားတဲ့အခါ သာသနာပြုအဖြစ် ဗာနဗ (Barnabas) ဦးဆုံးစေလွှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ Barnabas ဟာ ပြောင်းလဲခါစဖြစ်တဲ့ Saul ကို ကုပရုကျွန်း (Cyprus) မှ သူနဲ့အတူ သာသနာပြုဖို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Saul ဟာ နောင်တချိန်မှာ နာမည်ကြီးဆရာ Paul ဖြစ် လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုသူနှစ်ဦးဟာ Antoich သာသနာလုပ်ငန်းကို အောင်မြင်စွာ ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Antoich Mission ရဲ့ အောင်မြင်မှုအဓိက သော့ချက်(၃)ခုကို တွေ့ရပါတယ်။
1. "Christ can cross all boundaries and unify all people" ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ပေါ်မှာ သက်ရှင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ (၁)ရာစု ယုံကြည်သူများဟာ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာစကား အတားအဆီးတွေကို ကျော်ဖြက်ထိုးဖေါက်ပြီး Gentile ဆိုတဲ့ တပါးအမျိုးသားတွေကိုသာ သာသနာပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Antoich အသင်းတော်ဟာ ထူးခြားတဲ့ သာသနာပြုစိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့ အသင်းတော် ဖြစ်ပြီး World Wide Mission လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းကို မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ အသင်းတော် ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီနေ့ ကျွန်မတို့ MCF အသင်းတော်ဟာလည်း Antoich အသင်းတော်လို World Wide Mission ဖြစ်လာဖို့ ဘုရားရှင် ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အသင်းတော်ဖြစ်တယ်လို့ အသင်းသူ၊ သားများ ခံယူစေချင်ပါတယ်။ Malaysia, MCF သို့ ရောက်လာတဲ့ ယုံကြည်သူများကို ဘုရားရှင်ဟာ၊ US, Canada, Norway, Denmark, Australia, New Zealand, Romania စတဲ့ နိုင်ငံများသို့ ပို့ခဲ့ပါတယ်။ MCF ဟာ ယုံကြည်သူများကို ၀ိညာဉ်တော်နဲ့ ပြည့်ဝသူ၊ နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ ပြည့်ဝသူ၊ ရင့်ကျက်တဲ့ သာသနာပြုတွေ ဖြစ်လာဖို့ လေ့ကျင့် (Training) ပေးသော နေရာဖြစ်ပါတယ်။ MCF မှတဆင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးများသို့ သာသနာပြုများစေလွှတ်ဖို့ ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ (တမန်တော် ၁၁း၂၄) မှာ ဗာနဗအကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ သူဟာ ၀ိညာဉ်တော်နဲ့ ပြည့်ဝခြင်း၊ သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်း၌ခိုင်မြဲခြင်း စသည့်အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်ဝသော သာသနာပြုဖြစ်ပါတယ်။ MCF အသင်းသူ/သား များဟာလည်း ဗာနဗ၊ ပေါလု ကဲ့သို့သော သာသနာပြုဆရာများ၊ မစ်ရှင်နရီကောင်းများဖြစ်ပြီး World Wide Mission မှာ ပါဝင်ဆက်ကပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2. Antoich အသင်းတော်ရဲ့ သာသာနာပြုလုပ်ငန်း အောင်မြင်တဲ့ ဒုတိယအချက်သော့ချက် (တမန်တော် ၁၁း၂၆) မှာ တပည့်တော်တို့သည်လည်း ခရစ်ယာန်ဟူသော ခေါ်ဝေါသမုတ်ခြင်းကို အန္တိအုတ်မြို့၌ အဦးခံယူခဲ့ကြ၏ ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။ "The principles were called christian first at Antoich". ဘာကြောင့်လဲ ? ယုံကြည်သူအားလုံးဟာ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ အသက်ရှင်ကြတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ စိတ်ဓါတ်၊ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေထိုင်ပြီး၊ အစေခံတတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်အပြုအမူကြောင့် ခရစ်တော်နောက်လိုက်များ ခရစ်ယာန် (Christian) ဟု ခေါ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ MCF သာသနာအောင်မြင်မှုအတွက် အသင်းသားတွေဟာ Antoich အသင်းသားတွေလို ခရစ်တော်ရဲ့ နောက်လိုက်များအဖြစ် ပုံသက်သေပြပြီး၊ ကျွန်မတို့အား မြင်တွေ့၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံသူဟာ ခရစ်တော်ကို မြင်တွေ့သွားဖို့ အသက်ရှင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
3. Antoich အသင်းတော်ရဲ့ သာသနာလုပ်ငန်းအောင်မြင်တဲ့ တတိယသော့ချက်ဟာ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲတတ်တဲ့ စေတနာစိတ်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (AD 41-45) ရောမဧကရာဇ်မင်း Claudius လက်ထက်မှာ အစာခေါင်းပါးခြင်းဘေးနဲ့ Jeruslem အသင်းတော် ကြုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ Antoich အသင်းတော်က မိခင်အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့ Jeruslem အသင်းတော်ကို မြောက်များစွာ ထောက်ပံခဲ့ပါတယ်။ ပေးကမ်းကူညီတတ်တဲ့ အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ ကျွန်မတို့ MCF အသင်းတော်ဟာလည်း မိမိရဲ့ သာသနာလုပ်ငန်း အောင်မြင်ဖို့ အမိမြန်မာပြည်ရှိ အသင်းတော်များရဲ့ အခက်အခဲများကို တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က ပံ့ပိုးကူညီရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူ အဝေးရောက် အသင်းသူ/သားများဟာလည်း MCF ဆိုတဲ့ မိခင်အသင်းတော်ကို မည်သည့်နိုင်ငံကို ရောက်ရောက် ထောက်ပံ့ချင်သော စိတ်စေတနာရှိသူတွေ ဖြစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနှစ်(၂၀)ပြည့် အသင်းတော်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမှာ Antoich အသင်းတော်ရဲ့ သာသနာလုပ်ငန်းအောင်မြင်ခြင်းရဲ့ သော့ချက်ကို လေ့လာပြီး World Wide Mission ကို တက်လှမ်းကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ MCF အသင်းတော်ရဲ့ သာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာ Barnabas & Paul ကဲ့သို့သော သာသနာပြုကောင်းများ အဖြစ် ပါဝင်ဆက်ကပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ရင်း...
Rev. Dr. Winnie Zan Hta
KLBC မှ ခွန်အားပေးစာများ - REv. John Kok , Rev. Bobby Lam , Rev. Eddie Tan
ဧည့်သည်ဆရာများ၏ခွန်အားပေးစာများ - Rev Saw Shwe Done , ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ Singapore Judson Baptist Church , Rev Augustus, Rev Dr Paul F John, Rev Saw Ler Htoo
ဥက္ကဌနှင့်အတွင်းရေးမှုး၏ခွန်အားပေးစာ - Saw Gideon Morris, Aunty Thu Lay Paw
ကဗျာများ - သခင့်ဆီသို့၊ သူယောင်လမ်းမှား၊ ထာဝရ၊ လက်နက်တော်(၇)ပါး
MCF Sunday School ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း
မာန်(၅)ပါးကို အောင်သောဘုရား (Saw Sony Boy)
ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ(၃)ပါး (Rev Hla Myint)
အသင်းတော်၏သမိုင်းဝင်ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း နှင့် EC ကော်မတီအမှုဆောင်များ
စစ်မှန်သောမိတ်သဟာရ (Rev Dr Paul ခေကျိုင်း)
နောက်ဆုံးသောကာလ၏ဗျာဒိတ်ပြုချက် (Saya Paul La Ring)
အနာရောဂါငြိမ်းနည်း(၁၀)မျိုး (Sayama Tin Tin May)
ဒီနေ့..မနက်ဖြန် (Youth Pastor Saya Hkum Myat)
သူတို့ပြောကြားဘူးတာ(MCF)ဆိုတာ .. (စကားဝိုင်း)
ရွေးနှုတ်သူယေရှုရွေးနှုတ်ခဲ့ပြီ (Nu Nu ဟိုပင်)
My Name is မောရှေ ... (Dum Lawng)
Hartamas Myanmar Christian Fellowship
ကာရာနီကရုဏာအဖွဲ့ (Calvary Care Group)
H.C.F (Healthcare Christian Fellowship)
အသည်းရောင်အသားဝါ "B" အကြောင်းသိကောင်းစရာ
Bethlehem cell group (Sunday), Serdang cell group, Galilee cel group (Monday), PJ cell group (Tuesday) , Youth cell group (Saturday), KCF cell group (Wednesday), Jalan Tong Shin cell group (Thursday), 88-A cell group (Friday)
အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း (Rev Dr. ချိုမနားလိန်း)
အဝေးရောက် MCF အသင်းသူ/သားများ၏ သက်သေခံချက်
MCF..သို့.. လွမ်းချင်း.. (ကိုထူး - US)
အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင် (ဒေါ်နန္ဒာမောင်း - Denmark)
God is good all the time! ကိုသန်းထိုက်နှင့်မာသာလုမိသားစု)
လူငယ်နှင့်အိမ်ထောင်ရွေးချယ်မှု (Rev. La Seng)
KLBC ၊ MCF 13th March 2011 ၊ Blessed 20th Anniversary